ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: Motor Nameplate ဖတ်နည်း ( အင်ဂျင်နီယာ ပညာရပ်များ )
Motor Nameplate ဖတ်နည်း ( အင်ဂျင်နီယာ ပညာရပ်များ )
Motor nameplates များကို ဖတ်ရှုနားလည်ခြင်း
IEC standards အရ , မော်တာများအားသည် ၏ ဘော်ဒီ၌ nameplate ကို ကပ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ မော်တာ nameplate တစ်ခု၏ အချက်အလက်များကို အောက်ပါအတိုင်းဖတ်ရှုနားလည်နိုင်ပါသည်။
1. Manufacturer name and manufacturer-specific ordering code ဖြစ်သည်။ This code မှ frame size and mounting arrangement ကိုသိရှိနိုင်ပြီး၊ အသစ်တစ်လုံးလဲရန်အတွက်လိုအပ်သည်။ ပျက်သွားသည့် မော်တာတစ်လုံးကို အသစ်တစ်လုံးနှင့်လဲရန် အတွက် kW (HP) သာမက frame size and mounting arrangement တို့လည်းတူညီရန်လိုအပ်သည်။
2. Rated volts - မော်တာ၏ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကို (optimum performance) ရရှိရန်အတွက်လိုအပ်သော လျှပ်စစ်ဗို့ ပမာဏဖြစ်သည်။
3. Full load amps – ဆိုသည် မှာ မော်တာသည် ဝန်အပြည့်မောင်းနှင်သည့်အခါ Cable တွင်စီဆင်းသွားမည့် အမ်ပီယာဖြစ်သည်။ Full load amps သည် ကေဘယ်ရွှေးချယ်ခြင်း (cable sizing), စတတ်တာရွှေးချယ်ခြင်း (starter selection) and motor protection အတွက် Over load setting ချိန်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
4. Rated frequency in Hertz, and rated full load speed in revs/minute at that frequency.မော်တာကို ပေးသည့် AC လျှပ်စစ်ဓါတ်အား၏ Frequency ဖြစ်သည်။ ၅၀ သို ၆၀ Hertz ဖြစ်သည်။
5. Rated temp rise or insulation class – Industry standard specification of the thermal tolerance of the motor insulation. အင်ဆူလေးရှင်းအမျိုးအစားဖြစ်သည်။
6. Rated power (kW). သည် မော်တာမှထုပ်ပေးနိုင်သော Out put စက်မှုပါဝါ (Mechanical Power) ပမာဏဖြစ်သည်။ 7.5 kW သည် Out put Mechanical Power ဖြစ်သည်။ Out put Mechanical Power 7.5 kW ရရန် အတွက် Input electrical power မှာ 7.5 kW ထက်များရမည်။ ၈၅% efficiency ရှိသော မော်တာအတွက် Input electrical power မှာ 8.82 kWe ဖြစ်သည်။
7. Electrical connection and associated operating parameters – i.e. three phase motors can be connected ina‘star’ (Υ) or ‘delta’ (Δ) configuration. Inastar configuration the current flowing from the supply is reduced as is the torque.
၅၀ Hz နှင့် ဗို့အား ၆၆၀ မှ ၆၉၀ ရှိသော ပါဝါ နှင့် ‘star’ (Υ) ပုံစံဖြင့်ချိပ်ဆက်လျှင် Out put Mechanical Power 7.5 kW နှင့် 1450 rpm ကို ရရှိနိုင်သည်။ Power factor မှာ 0.87 ဖြစ်သည်။
၅၀ Hz နှင် ဗို့အား ၃၈၀ မှ ၄၂၀ ရှိသော ပါဝါ နှင့် ‘delta’ (Δ) ပုံစံဖြင့်ချိပ်ဆက်လျှင် Out put Mechanical Power 7.5 kW နှင့် 1450 rpm ကို ရရှိနိုင်သည်။ Power factor မှာ 0.87 ဖြစ်သည်။
၆၀ Hz နှင် ဗို့အား ၄၄၀ မှ ၄၈၀ ရှိသော ပါဝါ နှင့် ‘delta’ (Δ) ပုံစံဖြင့်ချိပ်ဆက်လျှင် Out put Mechanical Power 8.6 kW နှင့် 1750 rpm ကို ရရှိနိုင်သည်။ Power factor မှာ 0.87 ဖြစ်သည်။
8. Power factor for the motor. ထိုမော်တာနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပါဝါဖက်တာဖြစ်သည်။ မော်တာအား ပေးသည် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားနှင့် ချိပ်ဆက်သည့် connection configuration ပေါ်တွင်မူတည်၍ပြောင်းလဲနေသည်။
9. Efficiency class – IEC nameplates quote EFF ratings at full load. It isameasure of how well the motor converts electrical energy to mechanical power.
The information displayed onamotor nameplate may vary depending on manufacturer and motor size.
Squirrel cage induction motor တစ်လုံးသည် သာမာန်အားဖြင့်မည်သည့် တခြားသော device များနှင့်ချိပ်တွဲမောင်းနှင်ခြင်းမရှိလျှင် လည်ပတ်နှုန်းမှာ ပုံသေ(Constant) ဖြစ်သည်။
induction motor ၏လည်ပတ်နှုန်းကိုတွက်ရန်ပုံသေနည်းမှာ
F = supply frequency (in cycles/sec)= လျှပ်စစ်ဓါတ်အား၏ ကြိမ်နှန်း
P = number of motor winding poles- မော်တာတွင်ရှိသော pole အရေအတွက်
ဥပမာ4poles ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော Squirrel cage induction motor တစ်လုံးကို 60 hz လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြင့်ချိပ်ဆက်လျှင် ထိုမော်တာ၏ synchronous speed (load ဖြင့်မမောင်းလျှင်) လည်ပတ်နှုန်းကိုရှာပါ။
မော်တာမြင်းကောင်ရေကို အသုံးပြု၍ Full-load motor torque ကို တွက်ခြင်း
ဥပမာ မြင်းကောင်ရေ ၆၀အားရှိသော မော်တာကို 1725 rpm ရှိသော ဝန် (Load) မောင်းလျှင် torque မည်မျှရနိုင်သနည်း။
ရေးသားသူပြုစုသူ ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ်-ဘားအံမြေ အချိန် 7:40 AM